Fady (malagasy) Info. About. What's This?
ⓘ Fady (malagasy)
Andrianerinerina, araka ny fedràm-piaviana ao amin ny foko merina ao afovoan-tany eto Madagasikara, dia mpanjaka voalohany tao Imerina. Lazain ny fedrà fa fahatongavan-ko nofon ny zanak i Zanahary izy sady razamben ny mpanjaka merina. Araka ny fedrà ihany, dia nidina tety an-tany tamin ny toerana atao hoe Anerinerina ao avaratr Angavokely ny zanak i Zanahary mba hilalao miaraka amin ny Vazimba izay mponina voalohany teto Madagasikara. Ny anaran io toerana io no niavian ny anaran ilay mpanjaka. Nampitandremin i Zanahary ny Vazimba mba tsy hahandro ny ondrin Andrianerinerina izay tsy mahazo ...
Ny fady na faly, eo amin’ny kolontsaina malagasy, dia ireo zavatra raràna tsy azo tanterahina araka ny fepetra napetraky ny fomba amam-panao. Mety hisy fady momba azy ny olona na ny toerana na ny asa atao na ny zavatra iray ka miovaova isam-paritra eto Madagasikara izany. Araka ny finoana dia vokatry ny hery tsy hita maso sady mifandray amin’ny fivavahana aminny razana ny fady. Na dia misy ny fady iraisanny Malagasy rehetra dia misy ny fady tsy mahakasika afa-tsy ny faritra na ny tanàna na ny fianakaviana sasany ihany. Isan’ny maha malagasy ny Malagasy ny fananana fady sady mandray anjara amin’ny fiforonan’ny fiarahamonina sy ny maha izy ny tena. Ny fady fahita matetika dia momba ny fonondroana amin’ny fanondro ny fasana, ny fihinanan’ny vehivavy bevohoka amalona.
Misy fady mipoitra hatrany hatrany. Rehefa misy zavatra vaovao atomboka dia tsy maitsy manao joro fanatitra mba hanalana ny fady. Izay manota fady dia heverina ho maloto sy manohintohina ny filaminana ara-panahinny fiarahamonina, na tanteraka ny fanotam-pady na tsy tanteraka. Ny vahiny avy any ivelan’ny Madagasikara dia asaina koa mba hanaja ny fady isan-toerana sady hanova ny fitondrany ny fiainany hifanatraka amin’izany.
Hita taratra aminny lafin-javatra momba ny kolontsaina malagasy ny fady. Izany no andrenasana ny Malagasy manao hoe "aza fady".
Ny mpanoratra sasany milaza fa ny fady dia mitovy aminny zavatra andraràna nefa tsy voasoratra ao amin’ny kolontsaina tandrefana, izay miteraka tsy firaharahan’ny fiarahamonina ilay mpandika lalàna.
1. Karazana fady
Fady momba ny fifandraisanny olona samy olona
Fady arakaraka ny sokajinolona
ondry ary akoho amam - borona vorontsiloza indrindraindrindra ny Mahafaly. Fady amin ny Mahafaly, toy ny Antandroy koa, ny mihinana sokatra mahafaly: sokake
ary niditra taty afovoantany. Manaporofo izany, ireo Vazimba dia saika fady sira. Misy kosa anefa milaza fa ireo Maley sy Indoneziana ireo dia mpamboly
omby izany aza dia ariany. Fady kisoa sy tongolo ny vohitra misy ny Andriandoriamanjaka ka mbola maro no mitazona izany fady izany. Fadin - drazan ny Andriandoriamanjaka
Andrianampoinimerina mafy koa ny lalàna momba ny fahadiovana tao Ambohimanga: fady ny manary loto ary na dia ny katsaka sy ny voatavo aza dia tsy navelany
fanatanterahana. Toan ny Tranovola dia lapa hazo manjakamiadana tsara ho marihina fa fady tamin izany fotoana izany ny manangana trano tany na vato teto Antananarivo
ny lamban Andriamanjaka hatramin - dRalambo ka hatramin - dRanavalona III. Be fady ny manodidina ny fiompiana, fanenomana ary ny fivarotana lambalandy. Ohatra
hoe izany tsy voatonona teo, kanefa fantatra fa fanota fady ny Manjaka, fantatra fa fanota fady ny fanjakana, fan tatra fa tsy mety atao amy ny Manjaka
an - dRazakatsitakatrandriana dia natao tsy azo alehan ny andriana na ny entan andriana, fa fady ka natao hoe Ambohimanoro, satria misy olana mijoro eo manoro ny làlana tsy
Wikipedia: Fady (malagasy)